देशभर १३ सय ५१ जनामा कोरोना पुष्टि, कुन जिल्लामा कति थपिए ? [विवरणसहित] – Rapti Khabar
देशभर १३ सय ५१ जनामा कोरोना पुष्टि, कुन जिल्लामा कति थपिए ? [विवरणसहित]
असोज १२, काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा १३ सय ५१ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड -१९) संक्रमण देखिएको छ ।
यो सहित संक्रमितको संख्या ७४ हजार ७४५ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
यस्तै बितेको २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ८१७ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं ६४९, ललितपुरमा १३२ र भक्तपुरमा ३६ गरी कुल ८१७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
सोमबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या १९ हजार ६२४ पुगेको जानकारी दिए । यस्तै हालसम्म देशमा परीक्षण भएकामध्ये पोजेटिभ केस भने ७४ हजार ७४५ पुगेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा ८ हजार ६९५ जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा १० हजार ९२९ जना छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ७४२ जना कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन् । योसँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या ५४ हजार ६४० पुगेको छ ।
२४ घण्टामा चार जनाले ज्यान गुमाएका छन्। ज्यान गुमाउनेहरुमा सुनसरीकी ३८ वर्षीया महिला, भक्तपुरकी ५१ वर्षाीया महिला, बाँकेका ४७ वर्षीय पुरुष र गुल्मीका ३४ वर्षीय पुरुष रहेका छन् ।
नेपाली स्वदेश फर्काउन साउदीबाट हुने उडान तालिका सार्वजनिक
भदौ ८, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै गएको र विभिन्‍न जिल्लामा लकडाउन जारी गरिएपछि केही दिनका लागि स्थगित गरिएको उद्धार उडान फेरि सुरु हुने भएको छ । सोमबार रियादस्थित नेपाली दूतावासले साउदीमा कोरोनाको कारण समस्यामा परेर नेपाल फर्किनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीहरुलाई उद्धार गर्नको लागि चार्टर उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ । भदौ […]
भदौ ११, काठमाडौँ । कुशे औंसीको भोलिपल्ट गत बिहीबार बिहान म अबेरसम्म सुतेको थिएँ। बिहान ४ बजेसम्म काम गरेकोले निद्रा ढिलो खुलेको हुनुपर्छ। बिहान ९ बजेको हुँदो हो। मोबाइल बज्यो। नम्बर हेरें। मोबाइलमा ट्रु कलर एप छ। एपमा फोन गर्नेको नाम केपी ओली देखियो। मैले कोही होला प्रधानमन्त्रीको नाम गरेको भन्ठानें। कानमा एअरफोन लगाइरहेको थिएँ, […]